ကြားရ သိရ လွှတ်တော်မှ | ဥက္ကာကိုကို
ကြားရ သိရ လွှတ်တော်မှ
Posted in: သရော်စာ, ဟာသများ.	Leaveacomment
မင်းနေပြည်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ပုံမှန်အစည်းအဝေး နောက်ဆုံးနေ့။ ရက်စွဲမှာကား သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်ဖြစ်လေသတည်း။
““ဒုန်း….. ဒုန်း…… ဒုန်း””
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးခင်အောင်မြင့်က တူကလေးကို ခပ်ဆတ်ဆတ်ထုလိုက်သည်။ လွှတ်တော်စချေပြီ။
ဥက္ကဌကြီးက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများကို မျက်မှန်အောက်မှပင့်၍ တစ်ချက်ရှိုးလိုက်သည်။ တွေ့ပြီ။ စည်းကမ်းမလိုက်နာသည့် အမတ်တစ်ဦး။ ရှမ်းပြည်နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းပေါင်းနပ်။
““ဦးစိုင်းပေါင်းနပ်… ခင်ဗျား ဟိုနေ့ကလည်း ခေါင်းပေါင်းမဆောင်းလာဘူး။ ဒီနေ့လည်း ခေါင်းပေါင်းမဆောင်းလာဘူး။ ကျနော်မြင်ပါတယ်။ မမြင်ဘူးမထင်နဲ့””
ဦးစိုင်းပေါင်းနပ်က ခပ်ရို့ရို့ပင် ကျွပ်ကျွပ်အိတ်လေးထဲမှ ခေါင်းပေါင်းကို အသာထုတ်ဆောင်းလိုက်သည်။
ထို့နောက်…. မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ ဥပဒေကြမ်းများဆွေးနွေးခြင်းတို့ကို ဆက်လုပ်ကြသည်။
မီဒီယာဥပဒေကြမ်းကိစ္စကို ရောက်လာသည်။ အပိုဒ်တစ်ခုကို ဆွေးနွေးအတည်ပြုရာ ကန့်ကွက်မည့်သူရှိပါသလားဟု ဥက္ကဌကြီးမှ မေးသံအဆုံးတွင် ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး ခပ်တည်တည်ထရပ်သည်။
““ဥက္ကဌကြီးခဗျာ…. ဒီစာပိုဒ်ထဲမှာ သူအများဆိုတဲ့ စကားလုံးက မပြည့်စုံပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပြည်သူအများလို့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်သင့်ပါတယ်””
““ကျနော်ဖတ်သွားတဲ့အထဲမှာ ပြည်သူဆိုပြီး ဖတ်သွားတယ်။ ခင်ဗျား အိပ်ငိုက်နေလို့မသိလိုက်ဘူးထင်တယ်””
ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ် ဇက်ကလေးပုပြီး ပြန်ထိုင်သွားသည်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ်မှ ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင် ထဆွေးနွေးသည်။
ဆွေးနွေးသည့်အထဲမှာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေကို မသိမသာ ခွပ်ထည့်လိုက်၏။
““ဥက္ကဌကြီးခဗျာ…. ဦးလှဆွေဟာ… ပြန်ကြားရေးရဲ့လူဖြစ်ပါတယ်… ဒါကြောင့်…. ””
ဦးဖုန်းမြင့်အောင်ဆွေးနွေးပြီးစဉ် စောနက အခွပ်ခံလိုက်ရသည့် ဦးလှဆွေ ၀ုန်းခနဲထလာသည်။
““ဥက္ကဌကြီးခဗျာ… ကျနော်ဟာ ပြန်ကြားရေးလူမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်
ပြန်ကြားရေးလူဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးပါခဗျာ””
ဥက္ကဌကြီး ရယ်ချင်ပက်လက်ကလေးဖြစ်သွားသည်။ ““ဟဲ ဟဲ”” ဟုရယ်ပြီး တူကလေးကို ဒုန်းခနဲ တစ်ချက်ထုသည်။
““ဦးလှဆွေကို ပြန်ကြားရေးလူလို့ သမုတ်ခံရခြင်းအပေါ် လွှတ်တော်က ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပါကြောင်း””
ထို့နောက် မီဒီယာဥပဒေကြမ်းမှ အပိုဒ်တစ်ခုကို အတည်ပြုမဲခွဲရန် အချိန်ကျလာသည်။ ဥက္ကဌကြီးက သုံးကြိမ်အော်မေးသည်။
““သဘောတူပါသလား…. သဘောတူပါသလား…. သဘောတူပါသလား””
အဆင်ပြေသွားပြီ။ ထုံးစံအတိုင်း ထပ်မေးရသည်။
ဘယ်သူကထိုင်ခုံရွှေ့ပြီး ဘယ်သူက ချောင်းဟန့်သည်မသိ။ အသံနှစ်ခုထွက်လာတာမို့ ဥက္ကဌကြီး၏ ဦးခေါင်းက ရှေ့သို့ တစ်တောင်ခန့်ရှည်ထွက်လာသည်။
““ဟမ်… ဟမ်.. ဘာပြောလိုက်တာလဲ… ဟမ်””
ဘယ်သူမှမဖြေ။ ဥက္ကဌကြီး တင်းသွားသည်။ စည်းကမ်းချက်တစ်ရပ် ချက်ချင်းထုတ်သည်။
““နောင်ဆို ဥပဒေကြမ်းတွေ အတည်ပြုနေတဲ့အချိန်မှာ ထိုင်ခုံရွှေ့ခြင်း၊ ချောင်းဟန့်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ရန် သတိပေးလိုက်သည်””
ထိုနေ့မှစပြီး အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ချောင်းဆိုးရဲတော့မည်မဟုတ်ချေ။
|- ဥက္ကာကိုကို -|